ခဈြရတဲ့ခဈြသူလေးနဲ့သာယာလှပတဲ့ကမ်ဘာလေးတဈခုတညျဆောကျတော့မယျ ဆယျလီနဆေနျး – Shwe Nay Chi
ဖေ့စ်ဘုတ်ဆယ်လီနေဆန်း ကတော့ ..သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့..ဟာသလေးတွေ တင်ဆက်ရင်း လူသိများလာခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။..လှပတဲ့မျက်နှာ အမူအရာ အပြောအဆိုတွေကြောင့် လူအများရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
..ထို့ပြင် နေဆန်းကပရိသတ်တွေ အားပေးမှုကြောင့် ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝင်ငွေများဖြင့် ..သိန်းထောင်ချီ တန်သောအိမ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်.. ဆောက်လုပ်… နေထိုင်လာနိုင်လာခဲ့ပါတယ် နေဆန်းက..
လက်ရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်တွေ ကိုလုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိဆွတ်ခူးနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေဆန်းကလည်း သူ့ရဲ့ အလုပ်ကို.. အာဏာသိမ်းခံထားရ ချိန်တောင်မှ . ဂရုမစိုက်ပဲ အလုပ်တွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေ တာကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ …အပြစ်တင် ဝေဖန်မှုကိုလဲ.. အပြင်းအထန် ခံနေရပါတယ်…
အဲဒီနောက်ပိုင်း မှာတော့ နေဆန်းက ဘယ်ဘက်ကိုမှ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရပ်တည်လာခြင်းမရှိတာကြောင့်… နေဆန်းနှင့် ပတ်သတ်သည့် ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူးထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များက နေဆန်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းများကို ရပ်ဆိုင်းပစ်ရတဲ့အထိ ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ နေဆန်းက ပရိသတ်များအပေါ်မထိမဲ့မြင်ရေးသားချက်တွေကြောင့် အပြင်းအထန်ဝေဖန်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ နေဆန်းတစ်ယောက် ပရိသတ်တွေကို ပြန်လည်တောင်းပန်စာ ရေးသားလာ ခဲ့ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းတွေ မှာတော့ နေဆန်းတစ်ယောက် ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပျောက်ကွယ်နေပြီး Instagram မှာပဲ ပျော်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ နေဆန်းက ချစ်သူနဲ့အတူ ရွေလက်တွဲသွားပြီဆိုပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနီဝမ်းဆက်လေးနဲ့ ချစ်စရာေ ကာင်းတဲ့ စုံတွဲပုံလေးကို ကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါအုံးနော်.
Source: Nay San
ဖစျေ့ဘုတျဆယျလီနဆေနျး ကတော့ ..သူမြားနဲ့မတူ တမူထူးခွားတဲ့..ဟာသလေးတှေ တငျဆကျရငျး လူသိမြားလာခဲ့တဲ့သူ တဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။..လှပတဲ့မကျြနှာ အမူအရာ အပွောအဆိုတှကွေောငျ့ လူအမြားရဲ့အားပေးမှုကို… ပိုငျဆိုငျထားသူ တဈယောကျ ပဲဖွဈပါတယျ။
..ထို့ပွငျ နဆေနျးကပရိသတျတှေ အားပေးမှုကွောငျ့ ..ရရှိလာခဲ့တဲ့ ဝငျငှမြေားဖွငျ့ ..သိနျးထောငျခြီ တနျသောအိမျကောငျးကောငျးမှနျမှနျ.. ဆောကျလုပျ… နထေိုငျလာနိုငျလာခဲ့ပါတယျ နဆေနျးက.. လကျရှိမှာတော့ ..သူဝါသနာပါတဲ့ အလုပျတှေ ကိုလုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကိုရရှိကာ.. အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိဆှတျခူးနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
နဆေနျးကလညျး သူ့ရဲ့ အလုပျကို.. အာဏာသိမျးခံထားရ ခြိနျတောငျမှ . ဂရုမစိုကျပဲ အလုပျတှေ ဆကျလကျ လုပျဆောငျနေ တာကွောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ …အပွဈတငျ ဝဖေနျမှုကိုလဲ.. အ ပွငျးအထနျ ခံနရေပါတယျ… အဲဒီနောကျပိုငျး မှာတော့ နဆေနျးက ဘယျဘကျကိုမှ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ ရပျတညျလာခွငျးမရှိတာကွောငျ့ …
နဆေနျးနှငျ့ ပတျသတျသညျ့ ကွျောငွာမြား ရိုကျကူးထားသညျ့ လုပျငနျးရှငျမြားက နဆေနျးနဲ့ ပကျသကျတဲ့ လုပျငနျးမြားကို ရပျဆိုငျးပဈရတဲ့အထိ ဝဖေနျခံခဲ့ရပါသေးတယျ။အဲနောကျပိုငျးမှာတော့ နဆေနျးက ပရိသတျမြားအပျေါမထိမဲ့မွငျရေးသားခကျြတှကွေောငျ့ အပွငျးအထနျဝဖေနျခံရပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ နဆေနျးတဈယောကျ ပရိသတျတှကေို ပွနျလညျတောငျးပနျစာ ရေးသားလာ ခဲ့ပါတယျ။
ခုနောကျပိုငျးတှေ မှာတော့ နဆေနျးတဈယောကျ ဖဘေု့တျစာ မကျြနှာကနေ ပြောကျကှယျနပွေီး Instagram မှာပဲ ပြျောနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ နဆေနျးက ခဈြသူနဲ့အတူ ရှလေကျတှဲသှားပွီဆိုပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ စုံတှဲပုံလေးတှကေို တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ။ အနီဝမျးဆကျလေးနဲ့ ခဈြစရာ​ကောငျးတဲ့ စုံတှဲပုံလေးကို ကွညျ့ပွီးခဈြပေးကွပါအုံးနျော.